Fursad shaqo oo ka banaan wasaaradda cadaaladda Jubbaland | Jubbaland Media Online
Fursad shaqo oo ka banaan wasaaradda cadaaladda Jubbaland
Posted on April 19, 2016 in Arrimaha Bulshada, News In English // 0 Comments
SOO BANDHIGID FURSADO SHAQO
Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta ee Dowlad Goboleedka Jubaland ee soomaaliya ayaa waxaa ay raadineysaa aqoonyahanno dhawaan ka soo qalin jabiyey machadyadda ama jaamacadaha sare ee laqoonsanyahay. Takhasuska ladoonayo waxaa ka mid ah( cilmiga sharciga, Maamulka dadweynaha iyo kuwo kale oo la xiriira kicinta Waaxyaha cadaaladda.
Borogaraamka tababaridda qalinjabiyaasha waxey ulajeedadiisutahay in lasiiyo qalin jabiyaasha cusub fursado shaqo iyo machadyada cadaaladda ee Jubbaland iyo in ey wax kaqabtaan sida ey sabab unoqon laheyd guud ahaan shaqada dadweynaha xirfadeysan,si gaar ahna machadyada waaxyaha cadaaladda.
TABABARIDDA IYO HORMARKA
Codsadayaasha guuleysta waxey katirsanaan donaan Wasaaradda Cadaaladda,Maxkamadaha iyo Xafiiska Xeer Ilaaliyaha ee Jubbaland. Dadaka leh xirfad,balanqaad iyo karti kuwaasoo leh tacliin sare ee sharuudaha shaqada looga baahanyahay ama midkale oo uqalanta ayaa lagu dhiirigalinayaa in ey soocodsadaan. Tababaridda waxey siindoontaa fursad aad uwanaagsan dadka saxda ah eel eh xirfadda hormarinta iyo iney helaan dallacaad xirfadeed iyo fursado qoraal galin ah ee shaqada dadweynaha. XULASHADA AASAASKA
Si ey ugu qalmaan tababaridda qalinjabiyaasha,codsadayaasha waxaa looga baahanyahay in eey leeyihiin aasaaskan soo socda.
In ey dadooda udhaxeyso 20 ilaa 30 sano jir.
In ey heystaan shahaado jaamacadeed ama mid uqalanta ee sharciga iyo maamulka dadweynaha.
In uu yahay ama tahay muwaadin soomaaliyeed lehna baasaboor(baasaboorka waa fursad dheeri ah).
In siwanaagsan oogu hadli karo ama karto luuqadaha af Soomaaliga iyo Ingiriiskaba.
50% kuwa guuleysta waxey noqonidoonaan dumar,marka dumarka ayaa sigaar ah loogu dhiirigalinayaa in ey soo codsadaan fursadan xirfad tababarista ah.
Codsadayaasha fursada tababaridda xirfadeed waa qasab in ey soo gudbiyaan ama soo diraan dukumeentiyadan soo socda.
Taariikh kooban(CV) oo qeexeysa heerka aqooneed,khibrad shaqo iyo labo dugsi waxbarasho ama shaqo iyo raadraacayaal.
Koobi cadeyn shahaado jaamacadeed oo la aqoonsanyahay iyo natiijadooda.
Shahaado dugsi sare oo ansax ah.
Koobi baasaboorka Soomaaliya oo ansax ah. XULASHADA AASAASKA (aqoon,xirfad iyo khibradda loo baahanyahay)
Aqoon wanaagsan oo hanaan cilmi baarisleh,awood uleh lafaguridda arrimaha iyo qoraal dagdag ahna leh si cad iyo si qeexanna leh siineysana awood dhakhsasho leh,dhameystiran oon eexlaheyn sidaacad ah ugarqaadaya af iyo qoraal xog waran leh.
Fahansan hanaanka dowladnimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Codkar iyo afgarad xirfadeysan lagula xiriiro si xaqiiqi ah kuwa kala tirsan Garsoorka.
Lehna sharaf aad usareeysa iyoawood xaaleeyn qarsoodi ah markey timaado xaalad badan siinkarana waano eex laheyn.
Qeexid awood uukaga qeyb galo dhaqn galiyana kooxa yaryar iyo ballanqaad si xirfadleh oo loo wada shaqeynayo.
Xirfad maareynta warbixinta wanaagsan ey kujirto awooda lagu isticmaalo iyo maareynta safidda kuxisaabinta barnaamijka kumbiyuutarka kushaqeeyo.
Lehna shuruudaha aqoonta tacliinta sare oo anshax wanaag( kuwa kor kuxusan).
SIDA LOO CODSANAYO
Kuwa xiiseynaya iney imtixaanka galaan waa iney kusoo diraan codsigooda E-mail kan. mmohamedjowhar114@gmail.com
Oogu danbeyna waa Taariikh 15/03/2016.
Fursad shaqo oo soo bandhigtay wasaaradda cadaaladda Jubbaland